September (6) bat Mali
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dap Ba (5) up hkang ginra rai nga ai Laiza-Manmaw lam myen hpyen ni zing madu da ai KIA post dingsa rai nga ai Bum Sawn Bum kaw nga ai myen hpyen dap ni hte KAI Dung (24) na myu tsaw share ninghkring ni dai ni laja lana gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Myen asuya hpyen hpung ni gaw lu hka htum mat ai majaw lu hka ja yu wa ai kaw KIA myu tsaw share ninghkring ni hkap gasat lai wa ai re lam hte myen maga na si, hkala ai lam nga ai rai tim hkrak n chye lu shi ai lam na chye lu ai.
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အို အစိုးရနယ်မြေဖြစ်သော လိုင်ဇာ ဗန်းမော်လမ်း ယခင် ကေအိုင်အေပိုစ့်ဟောင်း ဖြစ်သော ဘွမ်ဆောန့်ပိုစ့်တွင် ရောက်ရှိနေသော ဗမာအစိုးရစစ်တပ်နှင့် ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များ ယနေ့ ပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဘွမ်ဆောန့်ပိုစ့်တွင် ရောက်ရှိနေသော ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်မှ သောက်သုံးရေပြတ်လပ်လာမှုကြောင့် တောင်အောက်သို့ သောက်ရေဆင်းခပ်ချိန် ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ ဆီးကြိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ ကျဆုံး၊ ဒဏ်ရာ ရမှုများရှိသော်လည်း မည်၍မည်မျှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည်ကို မသိရှိရသေးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
anhte mung na hka pyi hkum lu shangun mu dai sawa ni hpe...
Pan tap said...
Bum tsaw de gawt bang tawn nna hka pyi nlu lu ai sha sat sha myit ga law, an hteapala lahpawt ga ai
Dai bum sawn bum hkan galoi chyahkyi gap ai zawn hka ja sa wa ai myen hpe nsen nngoi ai baw hte shakrip kau mu law jaugawng la ni e
ခွေးမသားဒီဗမာတွေကိုကချင်မြေကရေကိုလုံးဝမသောက်ခိုင်းနဲ့ ဘွမ်ဆောန့်ဘွမ်ရဲ့တောင်အောက်ချောင်းအထက်ကနေ အဆိပ်ခတ်ထားလိုက်ကွာ၊ ဒီခွေးမသားတွေကို၊